မျိုးဆက်သစ် Galaxy Tab S4 10.5 နဲ့ Tab A 10.5 တို့ကို Samsung မိတ်ဆက် | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise မျိုးဆက်သစ် Galaxy Tab S4 10.5 နဲ့ Tab A 10.5 တို့ကို Samsung မိတ်ဆက်
ကိုရီးယားအီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Samsung ဟာ Galaxy Tab S4 10.5 နဲ့အတူ ဂျုနီယာတက်ဘလက်လို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Galaxy Tab A 10.5 ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Tab S4 10.5 မှာ DeX နဲ့အတူ S Pen တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူ့မှာ 10.5” Super AMOLED နဲ့ 2,560 x 1,600px ဖြစ်ပြီး (16:10) အချိုးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် samsung Galaxy Tab S4 ဟာပထမဆုံး two screens ထောက်ပံ့တဲ့ တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။
Snapdragon 835 chipset နဲ့ဖြစ်ပြီး 4GB RAM သုံးထားပါတယ်။ Android 8.1 Oreo တပါတည်း သုံးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဘက်ထရီစွမ်းအားကတော့ 7,300mAh နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 15W fast charger ထည့်ပေးထားပါတယ်။ LTE (Cat. 16) ဗားရှင်းနဲ့ Wi-fi ဆိုပြီးခွဲခြား ထုတ်ထားပါတယ်။ Wi-Fi ဗားရှင်းအတွက် ဈေးနှုန်းကတော့ 64GB model ကို $650 နဲ့ 256GB storage ကို $750 ဖြစ်ပါတယ်။ LTE model အတွက်ကတော့ 64GB model ကို ယူရို 760 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Tab A 10.5 မှာ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်း ဆိုင်ရာအနေနဲ့ Kids Mode နဲ့အတူ ကလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေစေမယ့် App ၈မျိုးအပြင် ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ BRIO World Railway နဲ့Toca Hair Salon3တို့ကို တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ တက်ဘလက်အသစ်ဟာ မိသားစုအကုန် သုံးလို့ရနိုင်စေဖို့ အတွက် Multi User Mode ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အချိန်နဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေအပြင်gallery ထဲကပုံတွေကို Always On Daily မှပြသပေး နေမှာပါ။ Tab A မှာquad speaker စနစ်နဲ့ Dolby Atmos ထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်။
Galaxy Tab A 10.5 မှာ 10.5” TFT LCD နဲ့အတူ 1,920 x 1,200px (16:10 aspect ratio) အချိုးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 450 ပရိုဆက်ဆာကို သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး 3GB RAM နဲ့အတူ 32GB storage ပေးထားပါတယ်။ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် LTE version (Cat. 6) နဲ့ Wi-Fi ဆိုပြီးထုတ်ပေးထားပါတယ်။ 7,300mAh ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့ဖြစ်ပြီး Wi-Fi ဗားရှင်းကို ယူရို 330 ၊ LTE ဗားရှင်းကိုတော့ ယူရို 390 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တက်ဘလက်သစ်တွေကိုတော့ သြဂုတ်လ ၂၄ရက်နေ့မှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
ကိုရီးယားအီလကျထရောနဈ ကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Samsung ဟာ Galaxy Tab S4 10.5 နဲ့အတူ ဂြုနီယာတကျဘလကျလို့ သတျမှတျနိုငျတဲ့ Galaxy Tab A 10.5 ကိုမိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Tab S4 10.5 မှာ DeX နဲ့အတူ S Pen တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ သူ့မှာ 10.5” Super AMOLED နဲ့ 2,560 x 1,600px ဖွဈပွီး (16:10) အခြိုးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ samsung Galaxy Tab S4 ဟာပထမဆုံး two screens ထောကျပံ့တဲ့ တကျဘလကျဖွဈပါတယျ။
Snapdragon 835 chipset နဲ့ဖွဈပွီး 4GB RAM သုံးထားပါတယျ။ Android 8.1 Oreo တပါတညျး သုံးနိုငျမှာဖွဈတဲ့အပွငျ ဘကျထရီစှမျးအားကတော့ 7,300mAh နဲ့ဖွဈပါတယျ။ 15W fast charger ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ LTE (Cat. 16) ဗားရှငျးနဲ့ Wi-fi ဆိုပွီးခှဲခွား ထုတျထားပါတယျ။ Wi-Fi ဗားရှငျးအတှကျ ဈေးနှုနျးကတော့ 64GB model ကို $650 နဲ့ 256GB storage ကို $750 ဖွဈပါတယျ။ LTE model အတှကျကတော့ 64GB model ကို ယူရို 760 သတျမှတျထားပါတယျ။
Tab A 10.5 မှာ လုပျဆောငျခကျြပိုငျး ဆိုငျရာအနနေဲ့ Kids Mode နဲ့အတူ ကလေးတှနေဲ့ အဆငျပွစေမေယျ့ App ၈မြိုးအပွငျ ဂိမျးတှဖွေဈတဲ့ BRIO World Railway နဲ့Toca Hair Salon3တို့ကို တပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးလိုကျပါတယျ။ တကျဘလကျအသဈဟာ မိသားစုအကုနျ သုံးလို့ရနိုငျစဖေို့ အတှကျ Multi User Mode ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ အခြိနျနဲ့ ပွက်ခဒိနျတှအေပွငျgallery ထဲကပုံတှကေို Always On Daily မှပွသပေး နမှောပါ။ Tab A မှာquad speaker စနဈနဲ့ Dolby Atmos ထောကျပံ့ပေးပါလိမျ့မယျ။
Galaxy Tab A 10.5 မှာ 10.5” TFT LCD နဲ့အတူ 1,920 x 1,200px (16:10 aspect ratio) အခြိုးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။ Snapdragon 450 ပရိုဆကျဆာကို သုံးထားမှာဖွဈပွီး 3GB RAM နဲ့အတူ 32GB storage ပေးထားပါတယျ။ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုအတှကျ LTE version (Cat. 6) နဲ့ Wi-Fi ဆိုပွီးထုတျပေးထားပါတယျ။ 7,300mAh ဘကျထရီစှမျးအားနဲ့ဖွဈပွီး Wi-Fi ဗားရှငျးကို ယူရို 330 ၊ LTE ဗားရှငျးကိုတော့ ယူရို 390 သတျမှတျထားပါတယျ။ တကျဘလကျသဈတှကေိုတော့ သွဂုတျလ ၂၄ရကျနမှေ့ာ စတငျဝယျယူနိုငျမှာပါ။
Previous articleXiaomi Mi Mix3ကိုစက်တင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့တွင် မိတ်ဆက်သွားမည်
Next articleMi 8 Explorer Edition ရဲ့ ကျောပြင်အဖော်အချွတ်က လိမ်ဆင်ကြီး